The Song of Names (2019) - Channel Zone
Posted by Little Man, Released on July 10, 2020, More episodes The Song of Names
Download The Song of Names (2019), Watch The Song of Names (2019), don't forget to click on the like and share button. Series The Song of Names always updated at Channel Zone. Don't forget to watch other series updates.
The Song of Names (2019)===================IMDb Rating – 6.3/10#Unicodeတယောထိုးတဲ့နေရာမှာ ဉာဏ်ကြီးရှင်ပီသလောက်အောင် တော်လွန်းတဲ့ ဂျူးလူမျိုး ပိုလန်နိုင်ငံသားလေး ‌
ဒေးဗစ်ရပ်ပိုပေါ့…….. ဒေးဗစ်ကို သူ့မိသားစုက တယောပညာဆက်လက်ဆည်းပူးဖို့ လန်ဒန်က မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆီမှာထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့အိမ်က မာတင်ဆင်မွန်စ်လို့ခေါ်တဲ့ သူ့အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ အချိန်တွေကြာလာပြီးတဲ့နောက်မှာ ညီအစ်ကိုတွေလိုဖြစ်လာကြပါတယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ ဒေးဗစ်အတွက်ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကို အကြီးအကျယ်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ရက်မှာ ဒေးဗစ်‌တစ်ယောက်ပျောက်သွားပြီး ဖျော်ဖြေပွဲအတွက်ငွေတွေများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ နှစ်၄၀နီးပါးကြာမြင့်ပြီးနောက် မာတင်ဟာ ဒေးဗစ်ကိုပြန်ရှာတွေ့ဖို့ သဲလွန်စတစ်ခုကိုရခဲ့ပါတယ်။ အဲ့သဲလွန်စနောက် လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ဖျော်ဖြေပွဲနေ့တည်းကနေ ၃၅နှစ်ကြာမြင့်တဲ့အထိ ဒေးဗစ်တစ်ယောက် ဘာလို့ပျောက်သွားတာလဲ…. ပြန်ရှာတွေ့ရင်ရော ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ ဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့် ကားကောင်းလေးဖြစ်ကြောင်း ညွှန်းဆိုချင်ပါတယ်။(ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်ရေးသားပေးသူကတော့ Thingyan ပဲဖြစ်ပါတယ်။)#Zawgyiတေယာထိုးတဲ့ေနရာမွာ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ပီသေလာက္ေအာင္ ေတာ္လြန္းတဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ပိုလန္ႏိုင္ငံသားေလး ‌ေဒးဗစ္ရပ္ပိုေပါ့…….. ေဒးဗစ္ကို သူ႔မိသားစုက တေယာပညာဆက္လက္ဆည္းပူးဖို႔ လန္ဒန္က မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ဆီမွာထားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ့အိမ္က မာတင္ဆင္မြန္စ္လို႔ေခၚတဲ့ သူ႔အ႐ြယ္ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ အခ်ိန္ေတြၾကာလာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ညီအစ္ကိုေတြလိုျဖစ္လာၾကပါတယ္။ တစ္ရက္မွာေတာ့ ေဒးဗစ္အတြက္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတစ္ခုကို အႀကီးအက်ယ္ျပဳလုပ္ေပးတဲ့ရက္မွာ ေဒးဗစ္‌တစ္ေယာက္ေပ်ာက္သြားၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖပြဲအတြက္ေငြေတြမ်ားစြာဆုံးရႈံးခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္၄၀နီးပါးၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္ မာတင္ဟာ ေဒးဗစ္ကိုျပန္ရွာေတြ႕ဖို႔ သဲလြန္စတစ္ခုကိုရခဲ့ပါတယ္။ အဲ့သဲလြန္စေနာက္ လိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေန႔တည္းကေန ၃၅ႏွစ္ၾကာျမင့္တဲ့အထိ ေဒးဗစ္တစ္ေယာက္ ဘာလို႔ေပ်ာက္သြားတာလဲ…. ျပန္ရွာေတြ႕ရင္ေရာ ဘာေတြဆက္ျဖစ္ၾကမလဲ ဆိုတာကို